संविधानसभाको निर्वाचन र साक्षर चितवन अभियान | चितवन पोष्ट दैनिक
संविधानसभाको निर्वाचन र साक्षर चितवन अभियान
संविधानसभाको निर्वाचनका लागि अब धेरै दिन बाँकी छैनन् । कुनै बाधा र व्यवधान नआएमा मंसिर ४ गते संविधानसभाको निर्वाचन हुनेछ । निर्वाचनमा कुनै दलको बहुमत आएमा वा बहुमत नआए पनि देशका लागि माया मान्ने दूरदर्शी नेताहरु छानिएमा र ती छानिएका नेताहरुले राज्यसञ्चालनका आधारभूत कुराहरुमा एकरुपता ल्याउन सकेमा, संविधानसभाको निर्वाचनभन्दा बाहिर रहेका पक्षहरुलाई सहमत बनाउन सफल भएमा दुई वर्षभित्रमा देशले नयाँ संविधान प्राप्त गर्नेछ ।
नयाँ संविधान निर्माण भएपछि पनि नयाँ संविधानअनुसारका संरचनाहरु निर्माण गरी राष्ट्रप्रमुख, विधायिका तथा सरकारका लागि निर्वाचन हुन दुई–तीन वर्ष लाग्ने नै छ । नयाँ सरकार भएपछि पनि विगत लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन भएका स्थानीय निकाय तथा नयाँ संविधानअनुसार व्यवस्था गरिएका समुदायको नजिकको सरकारका रुपमा रहने संस्थाको निर्वाचन गर्न पनि फेरि अर्को दुई–तीन वर्ष लाग्ने नै छ । सबै कुरा यथावत् र द्रुत गतिमा भएमा पनि यो प्रक्रियाले ८ देखि १० वर्ष लिने नै छ ।
विगतका अनुभवले सबै यी प्रक्रियाहरु यथा समयमा, सहज तरिकाले बिनाबाधा, अवरोध अगाडि बढ्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिने अवस्था छैन । यसै कारणले पनि होला, निर्वाचनमा होमिएका दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले संविधानसभाको निर्वाचनका लागि मत माग्ने क्रममा पनि संविधानका मूलभूत पक्षहरुमा हाम्रो र मेरो धारणा यो हो भन्ने विचार मात्र मतदातासँग नराखेर देशको विकास, जिल्लाको विकास यसरी गर्दछौँ, जिल्लाको विकासको मेरो अवधारणा र प्रतिबद्धता यी–यी हुन् भनेर भन्ने गरेको पाइन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने भौतिक विकासका कुराहरु पछि परे भने पनि खासै फरक पर्दैन । विज्ञान प्रविधिमा हुने विकासले, सोचाइमा हुने परिवर्तनले ती कार्य गर्न पछिल्ला दिनहरुमा अझै सहज पनि हुन सक्दछ । योजनाविहीन हुने भौतिक पूर्वाधारका विकासभन्दा विकास नहुनु नै राम्रो । तर, दक्ष जनशक्ति विकासको कुरा र बालबालिकालाई भविष्यका लागि निर्माण गर्ने कुरालाई समयले पर्खंदैन । यो कुरामा ढिला भयो भने एक पुस्ता नै पछाडि पर्दछ । समाज विकासको कार्य नै अवरूद्ध हुन्छ र समाज नै गलत दिशातिर लाग्दछ ।
नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको नयाँ संविधान, नयाँ सरकारको चाहना पूरा भएपछि त्यो नयाँ सरकारको सामु कसरी जनताको चाहना र विश्व परिवेशअनुसार देशलाई अगाडि बढाउने चुनौती खडा हुनेछ । नयाँ सरकार राष्ट्रनिर्माणको कार्यमा लाग्नुपर्ने छ । राष्ट्रनिर्माणको कार्य भनेको कसैले जादुगरी रुपमा एकाएक परिवर्तन गर्छु भनेर सम्भव हुने कुरा होइन । कसैले एकाएक सबैतिर परिवर्तन गर्छु भन्छ भने त्यो गफ मात्र हुनेछ, पत्याउने कुरा हुनेछैन । राष्ट्रनिर्माण हरेक घरपरिवार, समाज, गाउँ, सहर सबैतिर विकास र परिवर्तन भएमा मात्र सम्भव हुने कुरा हो । व्यक्तिको सोच, विचार, सीप र दक्षतामा परिवर्तन नआएसम्म र हरेक व्यक्तिले उत्पादनमूलक कार्यमा नलागेसम्म परिवर्तन सम्भव हुनेछैन । हरेक क्षेत्रको परिवर्तन र विकासका लागि देशले लगानी बढाउनु पर्नेछ । अपेक्षित विकासका लागि विदेशीको मात्र भर परेर सम्भव हुनेछैन । विदेशीले दिएको ऋण वा सहयोगमा देश बनाउँछौँ भनियो भने त्यो देशका लागि फेरि घातक हुनेछ । विभिन्न क्षेत्रमा विकास निर्माणका लागि, विकासका पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी वृद्धि गर्न राष्ट्रिय आयमा वृद्धि हुनुपर्ने छ । प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि नभएसम्म राष्ट्रिय आयमा वृद्धि असम्भव छ । प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि गर्न बेरोजगार युवाहरुलाई मात्र होइन, काम चाहने सबै नागरिकले रोजगार र काम पाउनु पर्नेछ ।
अर्कोतर्फ, विकासका लागि सबै नागरिक केही न केही काममा लाग्नुपर्ने छ । विकास निर्माणका लागि विभिन्न खालको जनशक्तिको आवश्यकता पर्नेछ । नागरिकलाई राज्यले व्यवस्था गरेका रोजगारमा लाग्न र आफैँ पनि रोजगार सिर्जना गर्न सकारात्मक सोच, ज्ञान, सीप र दक्षता चाहिने छ । त्यतिबेला सरकारका सञ्चालक, नीति–निर्माताहरुलाई उत्पादनमा सक्रिय योगदान गर्न सक्ने युवाहरुमा सकारात्मक सोच, सीप, दक्षता विकासको कार्य ढिला भैसकेको महसुस हुनेछ । समाज परिवर्तनमा तथा विकासका लागि सकारात्मक सोच, सीप र दक्षता नभएका तर शिक्षा पाएको छु, माथिल्लो डिग्री हासिल गरेको छु भन्ने सोच झनै घातक हुनेछ । अब के गर्ने ? राज्यसञ्चालकलाई र नीति–निर्माताहरुलाई साँच्चै जटिल समस्या खडा हुनेछ ।
नयाँ नेपालका नीति–निर्माताहरु आप्mनो जनशक्तिलाई दक्ष, सक्षम र उत्पादनमूलक बनाउन साना बालबालिकातर्फ फर्कनु बाध्यता हुनेछ । बालबालिकादेखि सकारात्मक सोच विकास गर्न, सानैदेखि सीपमूलक बनाउन नीति–निर्माताहरु विद्यालयका कक्षा कोठातर्फ फर्कनु पर्ने छ । विद्यालयका पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया नीति–निर्माताका लेखाजोखा गरिने र परिवर्तन गरिने विषयहरु हुनेछन् । त्यतिबेला आप्mनो जिम्मेवारीको मुख्य कामलाई भन्दा टिपुवा काममा दौडने, काममा झारा टार्ने, समय र शक्ति गफ गर्न र अर्काको आलोचना गर्ने कार्यमा लगाउने, समाजको आदर्श गुरू बन्नुको साटो बालबालिकालाई गलत कार्यहरु गर्न उत्प्रेरित गर्ने व्यक्तिका रुपमा नमुना बन्ने शिक्षकहरुले काम दिने छैनन् । त्यतिबेला सिर्जनात्मक र सकारात्मक सोच भएका, आदर्श र आप्mनो काममा समर्पित शिक्षकहरुको आवश्यकता पर्नेछ । स्वतः स्थायी र आन्दोलनबाट शिक्षक बन्न सफल भएका गैरव्यावसायिक शिक्षकहरुमा लागेको बानी परिवर्तन गर्न निकै कठिन हुनेछ । नीति–निर्माताहरुलाई शिक्षा क्षेत्रको यो विषय समस्याको अर्को पहाडका रुपमा खडा हुनेछ । त्यस्तै, तलबलाई स्वतः आउने रकमको रुपमा लिने, तोकिएकै जिम्मेवारीभित्रको सानो काम गर्नुपर्दा पनि थप रकम नभएसम्म नगर्ने, कामभन्दा गफ बढी गर्ने, विदेश जान र घरघडेरीको कुरामा मात्र समय धेरै खर्चने, राष्ट्र बिगार्ने तर राष्ट्रसेवक हँु भन्न नथाक्ने कर्मचारीहरु पनि परिवर्तन र विकासका साधक हैन, बाधक नै हुनेछन् ।
यसरी नीति–निर्माताहरु राष्ट्रका नागरिकको सोच, ज्ञान, सीप, दक्षतामा परिवर्तन नभएसम्म कुनै पनि क्षेत्रको विकास सम्भव हुँदोरहेन छ । सोचमा परिवर्तन ल्याउन राम्रो खालको शिक्षा चाहिने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नेछन् । नागरिकको सोचमा परिवर्तन ल्याउन आखिर ज्ञानको प्रचारप्रसार र उपयुक्त खालको शिक्षा नै आवश्यक पर्दछ । अर्को तरिकाले भन्दा ज्ञान, सीप र अन्य विकसित समुदायका अनुभव प्राप्त गर्न पुस्तक पढ्न र पढाउनु नै पर्ने हुन्छ । सबै नगरिकलाई एकैपटकमा पढाउन सम्भव हुनेछैन । नागरिकहरु आफैँ पनि ज्ञान, सीप हासिल गर्न, पढ्न र अनुभव खोज्न लागिपर्नु पर्नेछ । त्यसबेला पनि आप्mना नागरिक सामान्य साक्षरसम्म पनि नभएको तथ्यांकले देशको नेतृत्व गर्ने सरकार र नीति–निर्माताहरुलाई अर्को झड्का दिनेछ । साँच्चै नयाँ नेपाल निर्माणमा जुट्ने समयमा निरक्षरता अर्को निकै ठूलो समस्या हुनेछ । समाजमा हरेक व्यक्तिको कामलाई उत्पादनमूलक बनाउन, जटिल कार्यहरु गर्ने ज्ञान, सीप प्राप्त गर्न पुस्तक तथा ज्ञानका सामग्रीहरु पढ्नु नै पर्नेछ । नेट–इन्टरनेटबाट खोजी गर्नुपर्ने छ । यसका लागि युवा मात्र हैन गृहिणी, महिला, प्रौढ, मजदुर, किसान सबैमा पुस्तक पढ्ने र सिक्ने लहर ल्याउनु पर्नेछ । बालबालिकामा पढ्ने संस्कार निर्माण गर्न पनि हजुरआमा, हजुरबा, आमाबाबु तथा घरका वयस्कहरुले पढ्नुपर्ने छ अनि पुस्तक र ज्ञानगुनका विषयमा छलफल, चर्चा–परिचर्चा गर्नुपर्ने छ ।
जुन समाजले पछिको कुरा जति पहिला देख्न सक्छ र त्यसअनुसार पहिले नै आफूलाई त्यसका लागि तयार गर्छ, त्यही समाजले नै छिटो विकास गर्दछ र अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । त्यसैले, संविधानसभाबाट देशको चाहनाअनुसारको संविधान निर्माण गरेपछि, देश सञ्चालनका लागि योग्य सरकारको निर्माण भएपछि समाज परिवर्तनका लागि सबै आ–आप्mना ठाउँबाट लागिसकेपछि पनि वास्तविक परिवर्तन गर्न विद्यालयको कक्षा कोठाहरुमा नै लाग्नुपर्दछ । बालबालिकालाई धेरैभन्दा धेरै ज्ञान, सीप, दक्षता विकास गर्न र सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने अभियानमा समय खर्चनु नै पर्ने हो भने अहिलेदेखि नै त्यसका लागि लाग्नु दूरदर्शी हुन्छ । त्यसका लागि शिक्षकहरु इमानदारीपूर्वक आफूले जिम्मा लिएका बालबालिकामै केन्द्रित हुनुपर्दछ । युवादेखि प्रौढसम्म पुस्तक अध्ययनबाट ज्ञान, सीप, दक्षता आर्जन गर्न लाग्नु उपयुक्त हुन्छ । जागरणका लागि पढ्ने र पढाउने, सिक्ने र सिकाउने लहर नै ल्याउनु पर्ने हुन्छ । आजैबाट तथा संविधानसभाको चुनावसँगसँगै शैक्षिक सुधारका कार्यमा लाग्न पाए कसो होला ?
चितवनका संविधानसभाका उम्मेदवारहरुले आप्mना समर्थक शिक्षक र कर्मचारीलाई चुनाव प्रचारप्रसारमा हामी राजनीतिक व्यक्तिहरु नै लाग्दछौँ, तपाईंहरु आ–आप्mना कार्यमा प्रतिबद्ध भएर लाग्नुहोस् भनेमा के होला ? साक्षर चितवनको अभियानलाई पनि चुनाव प्रचारप्रसारसँगै लैजान सकेमा कसो होला ? मत माग्ने क्रममा तपाईंका छोराछोरी विद्यालयमा नपठाएको भए विद्यालयमा पठाउनुहोस् र निरक्षर भए साक्षर बनाउनुहोस्, युवाहरुमा अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नुहोस्, आवश्यक सीप सिक्नुहोस्, श्रमलाई सम्मान गर्नुहोस् भनेर सल्लाह पनि दिन सकेमा हाम्रो चितवनलाई सुन्दर बनाउन लागिपरेका दल र नेताहरुमा दूरदर्शिता देखिने थियो कि ?